Khasaaraha Data noqon kartaa xanuun weyn oo halkan aynu wada jeclaan lahaa inaan ka fogaano. Haddii aad tahay user macruufka ah oo kor ku dhamaaday guuldarro xogta, waxa ay noqon leh qalab kasta, qodobkan waxaa loogu talagalay adiga. Waxaan ka wada hadlaynaa sida ugu fiican ee soo kabsaday xogta laga qalabka iOS9. Ka hor inta inkastoo in, aynu si deg deg ah eegno sababaha ugu weyn ee keentay khasaaro xogta.
Sababta 1: Hardware / Software ayna - Waa arrin xaqiiqo ah oo la xaqiijiyay in in ka badan laba shanaad oo ka mid ah dadka isticmaala telefoonka smart lumin xogta ay sababta oo ah qaar ka mid ah qalabka ama nidaamka arrinta. Waxaa sabab u noqon karta inay keentay batari failure, si xun u isticmaalka qalabka iyo qofka xukuma fashilka. Waxaad ku ilaalin kartaa in ay hubiso in aad maamushaan qalab macruufka ah la daryeel ku haboon jawi nabdoon ee jeer oo dhan. Sidoo kale, hubi in aad loo ilaaliyo ku filan oo awooda batariga si looga fogaado failure lama filaan ah oo aan loo baahnayn.
Sababta 2: User Khaladaadka - Tani waa sababta 2aad ee ugu badan ee soo gaartay xogta, click shil badhanka / fursad u tirtirto yahay oo dhan in ay qaadanayso in la tirtiro xogta muhiim ah oo ku saabsan qalab macruufka ah. Dhaco resetting qalabka si Settings Factory waxay noqon kartaa mid ka mid ah sababaha uu ku luma xogta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u abuuraan nusqado joogto ah qalab aad, aad xoogaa hoos u dhigi kartaa qadarka xogta laga badiyay kiiskan.
Sababta 3 musuq Software / Codsiga - codsiga A xun ku suntan ama version ah oo gaboobay ee software-ka ku guul dareysto in waqti ka waqti sidoo kale keeni kartaa in xogta. Hubi in aad si joogto ah u cusbooneysiin aad software si looga fogaado in arrintan.
Sababta 4: kharimibo ama Fayrasyada - In kasta oo aan in wax caadi ah in qalabka macruufka, waxaa macquul ah oo ah qalab aad cudurka is la virus ama furin ah oo aan si buuxda meesha ka bixi karin. Marka cudurka, barnaamijyada xaasidnimo burburin kara macluumaadka ku saabsan qalab aad Koox ka mid ah waxyeelo kale oo ay qaban karaan ka mid ah. Isticmaal antivirus waxtar u leh ilaalinta daray qalabka iyo waxa ay ka dhigi dhibic si aan guji kasta oo xiriir la soo diray oo aan la garaneyn users / barnaamijyadooda iwm si looga fogaado dhibaato this.
Sababta 5: jailbreaking - Haddii aad tahay farsamo, oo ka fog jailbreaking joogo sida burburi kartaa qalab macruufka ay dhacdo in ay wax ka qaldan nidaamka. Waxa ay noqon doontaa dhibaato weyn, haddii ay taasi dhacdo sida Apple si cad uusan kordhin doonin wax taageero qalabka jailbroken oo waa laga tegi doonaa in aad ka fool dhaawac ku saabsan adiga kuu gaar ah.
Kabsado xogta lumay ka hore files gurmad
Qeybta 1: Isticmaalka Lugood
Marka hore, hubi in aad nooca ugu dambeeya ee Lugood .
Hadda, xiriiriyaan qalab macruufka ah si aad u computer iyadoo la kaashanayo data / amraya cable ah.
Orod Lugood iyo xulo qalab macruufka ah marka uu u muuqday on suuqa kala Lugood ah.
Riix fursad u Soo Celinta gudahood guddi kooban oo ku saabsan Lugood ah.
In shaashadda soo socda / arbushin ilaa uu furmo, guji badhanka soo celi mar kale. Lugood si toos ah u soo celin doonaa qalab aad hadda.
Marka qalab aad la soo celiyo iyo Banaadir, waxaad arki doonaa shaashadda 'slide in la dhiso' ku soo dhawaynayaa. Raac tallaabooyinka sida lagu faray by Kaaliyaha Setup ah in la dhiso qalab aad isticmaalaya gurmad ah hore.
Qeybta 2: Isticmaalka iCloud
Hubi in aad leedahay macruufka version ugu dambeeyey - Tag Settings> General> Software Update ku saabsan qalabka macruufka. In kiis version macruufka cusub waxaa laga heli karaa, download oo ku xidh.
Hubi haddii aad leedahay gurmad ugu dambeeyay ee laga heli karo ama ma - Tag Settings> iCloud> Kaydinta> Maamul Kaydinta iyo guji qalab ku hoos qoran hayaan si loo xaqiijiyo taariikhda iyo size of gurmad ugu dambeeyey.
Calan u qalab aad - Tag Settings> General> celi dooro 'masixi content oo dhan iyo goobaha' in la bilaabo. Markaas, marka in Kaaliyaha Setup ah, dooro 'samaysay qalab' iyo 'Soo Celinta ka kaabta ah' oo ugu dambeyntii login iCloud.
La taga ikhtiyaarka ah 'Dooro kaabta' ka dibna dooro file gurmad ka mid ah liiska ka mid ah hayaan on iCloud .
Qeybta 3: si toos ah Ladnaansho xogta lumay ka macruufka aad 9 qalab
Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta si toos ah uga macruufka aad 9 qalabka ka dibna waxaad u timaadeen inaad meel sax ah sida aan ku leenahay kaliya xal kugu habboon. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa codsiga in kaban karto xogta aad ka hesho qalab macruufka ah iyada oo aan la isticmaalayo Lugood / iCloud. Riix halkan kala soo bixi oo ku xidh on your computer.
Halkan waxaa ku qoran liis kooban ee waxan oo dhan software la yaab leh ma samayn karo.
Kabsado dhammaan noocyada file - xiriirada, fariimaha, videos, sawiro, xogta app, qoraalada iyo qaar badan.
Kabsado xogta ay dhacdo oo burbur ah in qalabka, tirtirka shil ah, arrimaha sababa ay sabab u tahay hagaajinta macruufka.
Kabsado xogta ay dhacdo screen buluug, casaan iyo caddaan dhimasho / shilalka iyo kuwa kale.
Kabsado xogta 3 tallaabo fudud - xirmaan, scan iyo soo kabsado.
Talaabada 1: Marka aad soo bixi oo lagu rakibay Wondershare Dr.Fone on your computer, waxaa lagu daahfuri iyo in aad computer ku xidhi qalab macruufka iyo sidoo.
Talaabada 2: Hadda, guji Start Scan si ay u bilaabaan baar qalab aad, marka uu ogaado by software Dr.Fone ah.
Tallaabada 3: Marka iskaanka la soo gabagabeeyo by Dr.Fone Wondershare, software waa in si toos ah taxdo dhamaan waxyaabaha ay u soo kabsadaan, taas waa in sidoo kale la soo xulay default. Hit button uu soo kabsan laga bilaabi karo habka ee ka soo kabatay dhammaan xogta ka qalab macruufka ah.
Sida loo xogta ka Huawei wareejiyo qalabka macruufka
> Resource > macruufka > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga macruufka 9 Qalabka (iPhone / iPad)